Conga Chibvumirano Lifecycle manejimendi: Kuvandudza Kushanda Kwekuita NeGwaro Kubuda Kushanda Kwekushandisa | Martech Zone
Kuitisa bhizinesi rinonzwa kusagadzikana kumutengi mukutarisana nemusika kuri kuwedzera mukuoma hazvisi nyore feat. Unyanzvi hweConga uye yakazara mhinduro suite yekushambadzira mashandiro - maitiro akapoterera Gadzira Mutengo Quote (CPQ), Mutengi Lifecycle Management (CLM), uye Zvinyorwa zveDhijitari - inobatsira mabhizinesi kugadzirisa kunetseka nechivimbo kuti vagone kupa kusagadzikana kwevatengi ruzivo uye mhanyisa mari.
NaConga, mabhizinesi anomhanyisa kukurumidza kusangana nezvinodiwa nevatengi nhasi uku achiwedzera kugadzikana kugadzirira ramangwana risina chokwadi. Conga's Dhijitari Gwaro Shanduko Suite yakagadzirirwa kushanda nekambani yako tekinoroji musanganiswa uye kubatanidza zvakananga neCRM yako.
Chii chinonzi Chibvumirano Lifecycle Management?
Chibvumirano Lifecycle Management ndiyo inoshanda, yakarongeka manejimendi yechibvumirano kubva mukutanga kuburikidza nemubairo, kutevedzera, uye kuvandudza. Kutevedzera CLM kunogona kutungamira mukuvandudzika kwakakosha mukuchengetedza mutengo uye kugona.
Conga Chibvumirano Lifecycle Management
Conga CLM ndeye kuguma-kumagumo chibvumirano lifecycle manejimendi (CLM) mhinduro inogumisa iyo nguva yemanyorerwo uye disjointed contract maitirwo uye kununura yakakwira-mhando zviitiko kune vese vemukati nekunze vatengi. Conga CLM inotyaira kontrakiti kugona pachiyero, inoderedza kutenderera nguva, inovandudza mhedzisiro yekutaurirana, uye inoderedza njodzi. Yakavakwa mugore, Conga yakabatana neCRM mhinduro yekurerutsa mashandiro ekutengeserana. Conga inopa masimba kune ese madhipatimendi parwendo rwavo kuti vabudirire kutengeserana.
Conga's yakazara solution suite inopa masimba mari, mashandiro, uye zvikwata zvemutemo kubata kunetsekana kwebhizinesi zviri nyore. Isu tiripo kubatsira kumhanyisa bhizinesi, kugadzirisa mashandiro, uye kushandura zviitiko zvevatengi. Nemhinduro dzehukuru hwese hwebhizimusi, isu takazvipira kusangana nemabhizinesi chaipo pavari kuti vaone chiratidzo chakajeka chekuti vanozo tevera kupi.
Frank Holland, CEO weConga
Conga CLM ndiyo yekutanga kontrakiti manejimendi manejimendi yekushandira ese matanho eiyo yekukura curve kubva novice kuenda kune nyanzvi kune ese makondirakiti. Musika wepamutemo hauna kana kumbove nechipo chimwe chete chinobva kubva kuzasi-kumagumo kusvika kumusoro-kumagumo eiyo yekukura curve. Nekuda kweizvozvo, Conga CLM haisi yakakura chete kumakambani anokurumidza kukura, asi mabhizimusi-kirasi kugona kuri kuwanikwa kune mabhizimusi eSMB / epakati nepakati pamutengo.
Vashandisi veSalesforce vanogona kubata zvibvumirano zvakanangana muchikumbiro apo vachishandisa contract contract yehupenyu hwekutenderera (CLM) kubva mukugadzira kusvika siginecha. Kwete izvozvo chete, asi timu yako yekutengesa inogona kuchengeta nekugadzirisa zvibvumirano zvisina muganho, kuburitsa mishumo, kuteedzera kudyidzana, uye zvimwe zvakawanda.
Conga Gwaro Workflow Kuzvigadzirira
Conga Zvinyorwa zvinorerutsa uye kuwedzera magwaro akakosha ezuva nezuva nepo uchisunungura vashandi kuti vaite zvakanyanya. Masangano anogona nyore nyore uye nemazvo kugadzira, kubata, kushandira pamwe, uye eSign zvese zvinyorwa zvine basa kubhizinesi.
Otomatiki anotora basa kunze kwekuita uye anobvisa matanho evashandisi ayo anogona kutungamira mukukanganisa, anochengetedza nguva yakakosha, uye anowedzera kugona pamwe nekugadzira. Yakachengeteka, yakasanganiswa eSignature kugona inoita kuti zvive nyore kupfuura nakare kose kupedzisa bhizinesi-rakakosha, magwaro anosunga zviri pamutemo kubva chero nzvimbo. Nemhinduro dzeConga Zvinyorwa, mabhizinesi anotenderera kuti ave nekukurumidza.
Chii chinonzi Gadzira, Mutengo, Quote (CPQ)?
Gadzira, mutengo quote software iri izwi rinoshandiswa mune bhizinesi-kune-bhizinesi (B2B) indasitiri kutsanangura software masisitimu ayo anobatsira vatengesi kutora zvigadzirwa zvakaoma uye zvinogadziriswa.
Conga Gadzira, Mutengo, Quote Solution
Conga CPQ ndeye gadzira mutengo mutengo (CPQ) mhinduro inotungamira zvikwata zvekutengesa kuti ivake uye igadzirise zvinopihwa nekupa simba kune vatengesi kuti vasarudze musanganiswa wakanakisa wezvigadzirwa nemasevhisi (kunyoreswa, masevhisi ekuremekedza, uye masevhisi ehunyanzvi) kubva kukisheni yepasirese. Conga CPQ inogadzirisa mhinduro, inoita mamodheru emitengo, uye inogadzira yakaringana makotesheni ekuhwina madhiri. Conga CPQ inofambisa ruzivo rwekutengesa kubva kune kuziva kwevatengi uye chinangwa chekutenga kuburikidza nekutenga chiito, zvichibatsira masangano kuwana hunyanzvi hwekutengesa nekupa masimba ekutengesa zvikwata kuti vatengese zvine mutsindo nenguva shoma.
Conga matekinoroji anogonesa mabhizinesi eese saizi, kune ese maindasitiri kutenderera pasirese, kutora manhamba ezvinyorwa uye zvibvumirano zvinoita kuti bhizinesi ravo rimhanye. Mhedzisiro yacho iri kuburitsa mari yekuchengetedza, yakakwira purofiti miganho, kukurumidza kuwana zvigadzirwa nemasevhisi, uye kukurumidza kumhanyisa bhizinesi.
Tora Demo reCongo
Tags: b2bcongaconga clmconga cpqchibvumirano otomatikichibvumirano chirongwacpqCRMyevatengi lifecycle manejimendigwaro manejimendiesignsignaturesalesforceworkflow automation
Nei Kwechokwadi-Nguva Kushambadzira Kwave Kuwedzera Kukosha Muiyo COVID Era
Nongedzo Yevatengesi Nezve Intellectual Property (IP)